Mhando dzakasiyana dzemabhalbhu pamusika, ndeipi yaunofanira kusarudza? | Green Renewables
Tomàs Bigardà | | Simba rekuchengetedza, Kumba Economics, Environment
Muchikamu chino isu tichatsanangura zvakasiyana mhando dzemabhuru, ayo anowanzo shandiswa mudzimba kana mumahofisi, nezvakanakira nekuipira.
Muchokwadi, parizvino 18% yemutengo wemagetsi bhiri yedu inoshandiswa pakuvheneka mudzimba uye inopfuura 30% mumahofisi. Kana isu tikasarudza mhando ye magetsi akakwana pamashandisirwo ega ega, tichawana ponesa pakati pe20% ne80% simba.
1 Maitiro ekufunga usati waziva mhando dzemabhuru:
2 Ndeapi maLumens? Uye maitiro ekuaverenga
3 Yakakurudzirwa mwenje yemakamuri mumba
4 Mhando dzebhubhu uye matipi ekuvasarudza
4.1 Akanakisa Led mababu
4.2 Akanakisa Eco halogen mababu.
4.3 Incandescent mababu.
4.4 Akanakisa Fluocompact bulbs.
5 Ndehupi hunhu hwekufunga nezvazvo?
Maitiro ekufunga usati waziva mhando dzemabhuru:
1. Kubudirira, ayo ari mawat (w) anodyiwa nemhando dzakasiyana dzemagetsi emagetsi.
2. Hupenyu hunobatsira, zvinoreva nguva yemhando yega yega yemabhalbhu.
3. Ruvara, sezvo mwenje iyo ichaburitsa ichave yero kana chena zvichienderana nekusarudza pakati pemhando dzakasiyana dzemabhuru. Izvi zvinoenderana nehunyanzvi hwaunoda, nekuti inogona kuve LED, eco halogen kana fluocompact.
4. Maitikiro Izvo zvakare zvimwe zvinhu zvekufunga nezvazvo kana uchisarudza pakati pemhando dzese dzemabhalbhu aripo, sezvo girobhu rimwe nerimwe rakaratidza kuti kangani kanogona kubhenekerwa nekubviswa.
Chimwe chinhu chekuchengetedza mupfungwa ndechekuti in Simba rekuchengetedza magetsi tinozvienzanisa maererano neyako kupenya, kuburikidza neyuniti yechiyero inonzi "lumens"Kana kuti"lumens”Izvo zvinongoratidza huwandu hwechiedza chakaburitswa.
Pane kudaro, zviri pamusoro mabhanditi emagetsi akayerwa mukati Watts (W), zvichiratidza kuti yakawanda sei magetsi kupedza.
Ndeapi maLumens? Uye maitiro ekuaverenga
Mubvunzo wekutanga watinofanira kuzvibvunza ndewekuzvibvunza kuti chii chinonzi Lumen?
Iwo mwenje, ndicho chikamu cheInternational System of Measurements kuyera kubwinya kunoyerera, chiyero chesimba remwenje rinoburitswa neicho chitubu, mune ino girobhu. Girobhu rega rega rinotungamirwa rinowanzo gadzira pakati pemakumi matanhatu nemakumi mapfumbamwe emwenje, saka tinogona kuverenga izvo imwe 15W akatungamirira girobhu racho ndaizopa mwenje kuburitsa ingangoita 1050 lumens. Chii chinganyanya kana kushoma kuve mwenje unogadzirwa ne 65W incandescent girobhu.
Izvi zvakaenzana ndiwo mugumisiro weiyo inotevera fomula: Chaizvo Lumens = Nhamba yeWatts x 70.
Yakakurudzirwa mwenje yemakamuri mumba
Mushure meizvozvo zvese zvatsanangurwa, isu tinogona kuona yakawanda inoshanda muenzaniso iyo ichave inosanganisira yekuziva ingani magetsi ekuchengetedza magetsi mababu anodikanwa kune imwe nzvimbo, iyo inogona kuve chero nzvimbo mumba.
Kuziva chii Chikamu chemwenje inokurudzirwa, isu tinofanirwa kutarisa kune iyo lux. Ichi ndicho Chidimbu chekuvhenekerwa kweInternational System, yechiratidzo lx, iyo yakaenzana nekuvhenekera kwenzvimbo iyo inowanzo neyakaenzana inogamuchira kubwinya kunoyerera kwe1 lumen pamamita mita.
Izvi zvinoreva, kana imba yakavhenekerwa negirobhu remwenje Lumen mazana mana, uye nzvimbo yemukamuri iri makumi maviri metres, mwenje wekuvhenekera uchave makumi maviri lx.
Zvichienderana nechikamu ichi, pane zvinokurudzirwa zviyero zveyero yemwenje mumamiriro epamba, zvinoenderana nezvinodiwa nenzvimbo yega yega mumba.
Imba yekicheni: kurudziro yekuvhenekesa kwakawanda iri pakati pe200 ne300 lx, kunyangwe yenzvimbo yebasa chaiyo (panochekwa chikafu nekugadzirwa) inokwira kusvika ku500 lx.
Dzimba dzekurara: yevakuru, kwete akakwirisa mwero inokurudzirwa kune yakazara mwenje, pakati pe50 ne150 lx. Asi pamusoro pemibhedha, kunyanya pakuverenga ipapo, mwenje wakatarisana unosvika 500 lx inokurudzirwa. Mumakamuri evana zvinokurudzirwa mwenje zvishoma zvishoma (150 lx) uye anenge mazana matatu lx kana paine chiitiko uye nemitambo nzvimbo.
Imba yekugara: Mheni yakajairika inogona kusiyanisa pakati pezana ne100 lx, kunyangwe yekutarisa terevhizheni zvinokurudzirwa kuti iwe udzike pasi kutenderedza 300 lx uye nekuverenga, semumba yekurara, kuvhenekera 500 lx yakatarisa.
Bhati: haudi mwenje wakawandisa, anenge zana lx akakwana, kunze kwenzvimbo yegirazi, yekuveura ndebvu, kuisa make-up kana kuzama bvudzi rako: kwakatenderedza 500 lx inokurudzirwawo ipapo.
Masitepisi, makoridho uye dzimwe nzvimbo dzekufamba kana kushoma kushandisa: iyo yakanaka ndeyemwenje wakajairika we100 lx.
Mhando dzebhubhu uye matipi ekuvasarudza
Akanakisa Led mababu
Ndiwo mazwi echiedza cheKwayedza Emitting Diode. Iyo akatungamirira girobhu racho Iwo ndiwo anoenderana zvakanyanya nharaunda, nekuti iwo anomiririra sarudzo yezvakatipoteredza pamwe nekuita basa.
Izvi zvinodaro nekuti ivo havabuditse yakawanda CO2 kupinda mune zvakatipoteredza seimwe mhando dzemabhuru, uye zvakare usaunze tungsten kana mercury.
Zvakare kana isu tichiongorora iyo main maficha yakataurwa pamusoro apa, hupenyu hwemhando dzakasiyana dzemabhalbhu, LED mababu anogona kushandiswa kwakatenderedza zviuru makumi mashanu emaawa. Iyo yekuchengetedza maererano nemashandisirwo yakanyanya kudarika kukosha, nekuti isu tichave tichidya zvakatenderedza 80% pasi pe chero imwe giraidhi yechinyakare incandescent.
Akanakisa Eco halogen mababu.
Chiedza chinopihwa nemhando dzemabhuru aya ndechechisikigo uye anotendeuka pakarepo. Nezve hupenyu hwayo hunobatsira, inowanzo kuve maawa zviuru zviviri, ichidya envelopu chetatu zvishoma pane iwo ma incandescent, atinozotaura pamusoro pazasi.
Kurasikirwa kwesimba nekuda kwehunhu hwekupisa kunofanirwa kutarisirwa, nekuti rudzi urwu rwemagetsi emagetsi dzinoburitsa kupisa.
Iko kushandiswa kwesimba ndiko kwakakwirira kupfuura ese mabhuru, atinozoona achiratidzwa mumashure meiyo magetsi bhiri.
Neraki, kubva muna 2009 zvichienda mberi, yanga ichigadzira kubviswa kwerudzi urwu rwemagetsi emagetsi kubva pamusika, ichipa nzira kumhinduro dziri nani dzinopa mhedzisiro yakafanana maererano nekupenya, asi nekushandisa kwakaderera zvakanyanya. Panguva imwechete iine huwandu hwakawanda hwekutenderera, ivo havagadzi kupisa uye kubereka iyo penda zvakanaka.
Akanakisa Fluocompact bulbs.
Aya marudzi emabhuru anozivikanwa se low comsumption; kuva nehupenyu hunobatsira pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi zvemaawa, uye uchidya pakati pe75 ne80% muzana pasi pechivanhu mabhuru.
Kana zviri zvekuvhenekera iyo yaanopa, izvi mhando dzemagetsi ekuchengetedza magetsi Izvo hazvikurudzirwe zvakanyanya kuti zvishandiswe munzvimbo dzekufambisa. Sezvo zvinowanzo kutora masekondi mashoma usati wapa iyo yese simba rekuvhenekera kwako.
Ndehupi hunhu hwekufunga nezvazvo?
a) Iyo nguva inotora girobhu mwenje kusvika kushanda kukuru, ndiko kuti, kumhanya kwayinoita.
b) Aperture angle kana mwenje wedanda, zvinoreva kuti nechepazasi kona, mwenje unozotarisa pane yakatarwa poindi.
c) Hupenyu hunobatsira hwebhuruu, ndokuti maawa ayo mwenje wegirobhu unogara.
d) Kubva pakuona kwemaonero, isu tichafungira mafomu. Tinogona kuwana globhu, kutenderera, kutenderera kana mabhuru emakenduru.
e) Kune mamwewo maumbirwo akasiyanasiyana ebhushu zvichienderana nehupamhi hwaro uye shinda mhando vane.
f) Nhamba yenguva girobhu mwenje inogona kuvhurwa uye kuvharwa, ndiko kuti, kutenderera kwavo.
g) Simba rechiedza kana mwenje, nenzira yekuti huwandu hwakawanda hwe lumens isu tinowana yakakura yakawanda mwenje.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Mhando dzakasiyana dzemabhuru, ndeipi yaunofanira kusarudza?
Switzerland inovhota chirongwa chekuvhara magetsi enyukireya
Turbine yemhepo kana mhepo yekumhepo inoshanda sei?